August 2019 - CeleLove
ယုတ်မာလိုက်ပုံများ တကယ့်စေတနာရှင်တွေ ပုံရိပ် ထိခိုက်စေတယ်ဗျာ.
ယုတ်မာလိုက်ပုံများ တကယ့်စေတနာရှင်တွေ ပုံရိပ် ထိခိုက်စေတယ်ဗျာ. သထုံ သြဂုတ် ၂၂ရက် တောင်ငူမှလာသော ရေးဘေးကယ်ဆယ်ရေးဆိုင်းပုဒ်တပ်(၆)ဘီးမော်တော်ယာဉ်နှင့် ယာဉ်မောင်းအပါဝင်(၄)ဦးတို့အား တရားမဝင်(ပျဉ်းကတိုး)သစ်များသယ်ဆောင်လာသောကြောင့် သြဂုတ် ၂၂ ရက် နေ့လည် ၁၂နာခွဲအချိန်ခန့်က သထုံမြို့ပေါ်တော်မှုကျေးရွာ ရန်ကုန်-မော်လမြိုင် အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်၌ သထုံခရိုင်မှုခင်းနှိမ်နင်းရေးဌာနမှ ရဲအုပ်ကျော်လင်းဦးနှင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ဖမ်းဆီးရမိအရေးယူထားကြောင်းသိရသည် …. ။ အတော်ကို […]
၁၈နှစ်မပြည့်တဲ့ယောက်ျားလေးတယောက်က ကလေးသေးသေးလေးတွေကိုမုဒိန်းကျင့်လို့ရလား ၁၈နှစ်မပြည့်တဲ့ယောက်ျားလေးတယောက်က ကလေးသေးသေးလေးတွေကို ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာ မုဒိန်းကျင့်လို့ရလား ကျွန်မ မသိလို့ မေးပါရစေ …. ။ ပြုကျင်ခံရတဲ့ ကလေးက ဆေးရုံက မဆင်းရသေးဘူး ပြုကျင့်တဲ့တရားခံက အချုပ်ကထွက် ရွာလည်လျှောက်ပြီး ခိုးနေတာကို ခွင့်ပြုပါသလားရှင့် …. ။ ပြုကျင့်သူဟာ သူငယ်ချင်းရည်းစားကိုလည်း မတရားပြုကျင့်ခါ […]
ဆက်ဆီ မကျလို့ လမ်းခွဲချင်တာဆိုပြီး ရင့်ရင့်သီးသီးအပြောခံခဲ့ရတဲ့ GOO HYE SUN
ဆက်ဆီ မကျလို့ လမ်းခွဲချင်တာဆိုပြီး ရင့်ရင့်သီးသီးအပြောခံခဲ့ရတဲ့ GOO HYE SUN Ahn Jae Hyun နဲ့ GooHye Sun တို့ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေး ဇာတ်ထုပ်ကတော့ တော်တော်လေးကို ရှုပ်ထွေး နေပါတယ်။ အရမ်းကို ချစ်တဲ့ စံပြစုံတွဲလို့ အားလုံးက ထင်ထားခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာတော့ […]
မိနစ်ပိုင်းသာဖြစ်ပေမယ့် အမျိုးသားတွေရဲ့ အရှိုက်တည့်တည့် ကိုထိမှန်သွားစေခဲ့တဲ့ ဗီဒီယို
မိနစ်ပိုင်းသာဖြစ်ပေမယ့် အမျိုးသားတွေရဲ့ အရှိုက်တည့်တည့် ကိုထိမှန်သွားစေခဲ့တဲ့ ဗီဒီယို ပရိသတ်ကြီးရေ ၊ ဒါရိုက်တာ ဂျိုး ကတော့ အမျိုးသားတွေရဲ့ အရှိုက်တည့်တည့် ကိုထိမှန်သွားစေတဲ့ ဗီဒီယိုတစ်ခုကို ဖန်တီးပုံဖော်လိုက်ပါတယ် …… ။ အမျိုးသားတွေ အနေနဲ့ အမျိုးသမီးတွေအပေါ် များသောအားဖြင့် ကျူးလွန်တတ်တဲ့ အပြုအမူတွေအတွက် အဆိုပါ ဗီဒီယိုလေးကို […]
နေအိမ်ရှေ့တွင် ကြောင်နှင့်ဆော့နေတဲ့ သုံးနှစ်သမီးအား အသက် (၇၀) အဖိုးကြီးမှ လမ်းမပေါ်တွင် မုဒိမ်းကျင့်ရန် ကြိုးစားခဲ့တဲ့ CCTV(ရုပ်သံ)
နေအိမ်ရှေ့တွင် ကြောင်နှင့်ဆော့နေတဲ့ သုံးနှစ်သမီးအား အသက် (၇၀) အဖိုးကြီးမှ လမ်းမပေါ်တွင် မုဒိမ်းကျင့်ရန် ကြိုးစားခဲ့တဲ့ CCTV(ရုပ်သံ) နေအိမ်ရှေ့တွင် ကြောင်နှင့်ဆော့နေတဲ့ သုံးနှစ်သမီးအား အသက် (၇၀) အဖိုးကြီးမှ လမ်းမပေါ်တွင် မုဒိမ်းကျင့်ရန် ကြိုးစားခဲ့တဲ့ CCTV(ရုပ်သံ) ထိုင်းမြောက်ပိုင်း ချင်းမိုင်မြို့ မှာ နေအိမ်ရှေ့မှာ ကြောင်နဲ […]
ဝမ်းနှင့်​ ပတ်​သက်​​သော​ရောဂါများ အတွက်​ အိမ်​တိုင်း​ဆောင်​ရန်​ ​ဆေးတစ်​လက် ဝမ်းနှင့်​ပတ်​သတ်​လျှင်​ ဝမ်းချုပ်​ခြင်းအ​ကြောင်းအရင်​သိရပါမယ်​ … ။ ဝမ်းချုပ်​ခြင်းဆိုတာ ဘာလဲ?… ဝမ်းချုပ်ခြင်းဆိုတာ​​​​လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်က နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံတွေမတူညီတဲ့ အတွက် တစ်နေ့ကို ဘယ်နှကြိမ် ဝမ်းသွားမှ ပုံမှန်ဆိုတာတော့ ပြောဖို့အလွန်ခက်ပါတယ်။ ဝမ်းချုပ်ခြင်းက အစာအိမ်စနစ်ကို ခက်ခဲစေပါတယ်။ ဝမ်းချုပ်ခြင်းကြောင့် အစာအိမ်နာကျင်တာ […]
ပူနေတဲ့ဗိုက်ကို လုံးဝပြားချပ်သွားစေမယ့် ကိုယ်တိုင်လုပ် သဘာဝဖျော်ရည် (၄)မျိုး
ပူနေတဲ့ဗိုက်ကို လုံးဝပြားချပ်သွားစေမယ့် ကိုယ်တိုင်လုပ် သဘာဝဖျော်ရည် (၄)မျိုး ပျိုမေတို့မျက်နှာလေးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစား နှစ်မျိုးလုံးအတွက် စိတ်တိုင်းမကျစရာ သိပ်မရှိပေမယ့် ဗိုက်နေရာလေးပဲပူနေတယ်ဆိုရင် ဒီဗိုက်ကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုလျော့နည်းနေပြီး ဘာဝတ်ဝတ် ဗိုက်ကို ဖုံးကွယ်ပေးမယ့် အဝတ်အစားတွေကိုပဲရွေးချယ်မိနေမှာပါ။ ပျိုမေတို့ကို ယုံကြည်မှုလျော့နည်းစေတဲ့ ဒီဗိုက်ကိုအပြုတ်ဖြုတ်ချင်ပေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်းလည်းမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင် ဒီဖျော်ရည်လေးတွေသာ ကိုယ်တိုင်ဖျော်သောက်လိုက်ပါ။ မလိုချင်တဲ့ ဗိုက်ပူလေးလည်း […]
အရက်မူးတဲ့အချိန်တိုင်းမှာ အမျိုးသမီးတွေနဲ့ အီစီကလီဖုန်းပြောလေ့ရှိတဲ့ Ahn Jae Hyun Goo Hye Sun ကတော့ သူမရဲ့ ဥပဒေအကြံပေးဘက်ကနေတစ်ဆင့် ကွာရှင်းရတဲ့ဖို့အတွက် ဆွေးနွေးခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းဖြစ်တဲ့ Ahn Jae Hyunရဲ့ အပြုအမူတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အသိပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ Goo Hye Sunကတော့ သူမဘက်ကနေ […]
သင့်ဘဝထဲကို လူကောင်းတွေပဲ ရောက်လာစေချင်ရင် ဒီ (၅) ချက်ကို လုပ်ဆောင်ပါ
သင့်ဘဝထဲကို လူကောင်းတွေပဲ ရောက်လာစေချင်ရင် ဒီ (၅) ချက်ကို လုပ်ဆောင်ပါ ဘဝမှာ လူကောင်းတွေနဲ့ပဲ တွေ့ဆုံချင်တာ လူတိုင်းရဲ့ ဆန္ဒပါ။ ကိုယ်အရမ်းယုံကြည်ပြီးမှ၊ ကိုယ်အရမ်း ပုံအောပြီးမှ ကိုယ့်ကို သစ္စာဖောက်သွားတာမျိုး၊ နောက်မှ အကျင့်တွေပြောင်းသွားတာမျိုးတွေ ကြုံလာရတဲ့အခါ အရမ်းကို နာကျင်ခံစားရတတ်ပါတယ်။ ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ ဘဝမှာ လူကောင်းတွေပဲ […]